Mari hairari: kudyara muvhiki | Ehupfumi Zvemari
Iwe haufanire kumirira Muvhuro kuti utengese mari, asi mamwe masheya indekisi uye zvigadzirwa zvemari zvinowanikwa mukupera kwesvondo Mumakore achangopfuura, iyo sarudzo yekushanda mune zvemari zviridzwa yave kuvhura panguva yeMugovera neSvondo, kunyangwe kubva kumisika yakadaro ine hungwaru semari chaiyo.
Kusvika parizvino, kudyara muzvikwereti kwakatevera nhanho dzemazuva ekushanda, kubva Muvhuro kusvika Chishanu, kuve nenzvimbo dzakadzikama mukati mevhiki. Kubva Chishanu masikati, vatengesi havana imwe sarudzo asi yekuzorora kusvika mangwanani eMuvhuro kutangazve mashandiro mumisika yemari.
Pakati pegore rezvemari ra2018, mazuva matanhatu emafestina anosanganisirwa, uye mamwe madhiri maviri nekuvharwa kwekutanga muSpanish stock exchange, misika yesarudzo (MEFF) uye chikwereti chemubatanidzwa (AIAF). Nezve misika yepasi rose, maitiro acho anotongwa nemaitiro akafanana mune dzese misika yavo yakanyorwa.
1 Yevhiki yekudyara: mamodheru
2 Mushure memaawa misika
3 Unoshanda mumisika yepasi rese
4 Kuisa mari mune chaiyo mari
5 Unoshanda mumisika yenyika
6 Kubatsira kwerudzi urwu rwekudyara
7 Njodzi mune aya mashandiro
Yevhiki yekudyara: mamodheru
Nekudaro, maitiro aya ari kuchinja semhedzisiro yekuwedzera kuchinjika kunoitwa mumisika yemari uye ne kutaridzika kwezvigadzirwa zvitsva Ivo vanoshandawo pakupera kwevhiki. Kusvika padanho rekupa iwo mukana wekudyara munguva dzino dzichiri kusanzwisisika nechikamu chakanaka chevashandisi uye kutora mukana wekufamba kwemari dzakasiyana dzemari kuita kuti kuchengetedza kunobatsira. Imwe neimwe nguva kupihwa uku kuri kuwedzera nekuti mari hainzwisise nguva yekufamba mumisika.
Nezve misika yemasheya, huwandu hwakawanda hwenzvimbo dzekutengesa dzinovharwa mukati mekupera kwesvondo kwegore. Icho chibvumirano chave chichishanda kwenguva yakareba, asi hachishandiswi mune mamwe matunhu. Nekuti mune mimwe misika yekunze iwe unogona zvakare kuisa mari kune ano mazuva evhiki ayo akabatanidzwa nekuzorora uye zororo. Iyi ndiyo kesi yeiyo Israeli ne Saudi Arabia Arabia stock exchange, iyo nekuda kweakasarudzika maitiro emakambani avo anotendera vanoita mari kuti vashande nehunhu hwedunhu ravo.
Mushure memaawa misika
Chero zvazvingaitika, chinokanganisa chikuru kugutsa chishuwo ichi ndechekuti zvakaoma kwazvo kushanda nemisika iyi kubva ku nevaichinja uye vamiriri veSpain vezvemari. Hakuzovi nemimwe mhinduro kunze kwekutora chinongedzo icho kana iwe ukaunganidza iri rakakosha basa rezvemari. Uye mune chero mamiriro, pasi pevamwe makomisheni anorema kupfuura kuEuropean kana kuNorth America equities. Iko kumiganhu yekureverera inogona kupetwa kana kunyangwe katatu kuti ivhure nzvimbo munzvimbo dzakachengetedzwa.
Zvakareruka, uye panguva imwe chete zvinoshanda, kuenda kumisika sekunge ndizvo wokutengesera mushure memaawa muUnited States. Kunyanya, kuita mamwe mabasa mukati memazuva ano evhiki. Nemikana mikuru yekuwana mihombe mibairo nekuda kwekushomeka kwemitengo yayo, asi nenjodzi yakavanzika inopfuura iyo yezvimwe zvigadzirwa zvemari. Nekudaro, imwe yemisika inoshanda kwazvo mukati memazuva ekupedzisira evhiki ndeye ramangwana remasheya. Kuti uite izvi, hauzove nesarudzo kunze kwekutarisa pane hombe indices dzepasi rose: Dow Jones, Nasdaq kana Eurostoxx. Ivo vari mukuenderera mberi chiitiko zuva rega rega, pasina kana chero zororo.
Unoshanda mumisika yepasi rese
Vatarisana nemhirizhonga chero pakupera kwevhiki vanoita ne kusagadzikana kukuru Nekuenderana kwemitengo yavo. Naizvozvo, varimi vanoda kufambidzana nenyika yemari vanozokwanisa kushanda nemisika iyi nerusununguko rwakakwana kubva kumapuratifomu akakosha emari. Misiyano mumutengo yacho yakakwira kupfuura kudyara kwechinyakare uye semhedzisiro yehunhu uhwu mikana inovhurwa kuitira kuti mashandiro ave anobatsira.
Kubudikidza nezano iri zvinokwanisika kutengesa muAsia index ramangwana iro rinogamuchira zvikuru kune urwu rudzi rwekufamba muzvikamu. Semuenzaniso, mune mareferensi nzvimbo senge Nikkei 225 kana China Hang Hang. Chero zvazvingaitika, misika iyi inobvumidza kutarisira kutora chinzvimbo kana ichivhurwa pamberi pemisika yekondinendi yekare. Kubva pakati pehusiku ivo vanenge vatove kushanda kune chero mhando yekutenga kana kutengesa kwemasheya kana ramangwana.
Kuisa mari mune chaiyo mari
Imwe yedzimwe nzira dzekuzadza mukaha uyu wakasara mukudyara pakupera kwevhiki unomiririrwa neimwe yeiyo cryptocurrencies inonyanya kukosha panguva yacho. Sezvazviri mune chaiyo kesi ye bitcoin yakanyorwa pamusika unodzorwa weChicago. Kune rimwe divi, iro zvakare rinomiririrwa neramangwana remari iyi chaiyo kana neshanduko dzayo nemari hombe yemusika: dhora, euro kana Chinese yuan. Ino nguva, kubva kune mamwe epamhepo ekudyara mapuratifomu.
Kana iwe uri kufunga kuti mari chaiyo ndeyemhando yemari inobatsira kwazvo, ita shuwa kuti hauna kukanganisa. Asi zvirokwazvo kubvira pamusoro nzira dzine hukasha zvakanyanya kupfuura avo vakambofumurwa. Hazvishamisi kuti njodzi dzaunotora mukushanda hadzina chokwadi. Kusvika padanho rekuti iwe unogona kusiya chikamu chakanaka chemari yakadyarwa. Iyo nguva yekufungisisa ichauya uye zvibvunze pachako kana zvichinyatso kukosha kusarudza iyi ine njodzi kudyara. Iwe une zvakawanda zvekurasa mune izvi zvakakosha, asi hunyanzvi hwemari zviwanikwa.
Unoshanda mumisika yenyika
Kana iwe uchida kuisa mari yako kunze kwenguva, ndizvo kunze kwemaawa akajairika, iyo nyika equities hongu iyo inokupa iwe mashoma mikana kupfuura mumisika yepasi rose. Kusvika padanho rekuti mikana ishoma uye pamusoro pezvose zvakaganhurirwa maererano nechipo icho idzi mari yemari inokupa panguva ino chaiyo. Iwe uchafanirwa kuenda kune ramangwana misika yeSpanish stock stock. Asi chero zvazviri, pasi pezviitiko zvakaomarara zvisinga gutse zvaunofarira mune chikamu chekudyara.
Kune rimwe divi, iwe haugone kukanganwa chero nguva kuti iyi imwe nzira kune yechinyakare kudyara kazhinji inodhura kumakomisheni kuti mashandiro avo anosanganisira. Nekuwedzera kwemitengo inogona kusvika pamatanho padyo padyo ne30%. Zvakafanana nekuzvibvunza iwe izvozvi kana uchinyatsoda kupinda mumisika iyi inokosha. Kunyanya kana iwe uine zvimwe zvinokwezva kunze kwemiganhu yedu. Uye zvakare, iine njodzi yakanyanya kuwanda mune yega yega mashandiro anoitwa mumisika yemari iyi.
Kubatsira kwerudzi urwu rwekudyara
Iwe unofanirwa zvakare kuzvibvunza pachako kuti ndeapi mabhenefiti ekutora aya mashandiro mumisika yemari. Nekuti pakupera kwezuva isu tiri kutaura nezvekudyara kwakasiyana zvakanyanya mune angangoita ese makanika. Mupfungwa iyi, zviri nyore kuti iwe uzive kuti ndeapi mabhenefiti auchazowana nekusarudza yerudzi urwu rwekudyara zvakanyanya. Zvirinani kana zvasvika kune vashoma uye vepakati varimi vane yakawanda inodzivirira kana inochengetedza chimiro. Uye pakati payo atinofumura pazasi anoonekera.
Iwe haufanire kuzviganhura kune zvakajairwa zvirongwa uye neiyi nzira iwe uri muchinzvimbo chekuwedzera mikana yako kuti mari yako pachako ibatsirwe. Kunyangwe iri pamutengo wekubata njodzi huru mukushanda.
Unogona sarudza mari dzakasiyana dzemari. Kubva pane zvimwe zvetsika kune vamwe izvo zvine hunyanzvi uye vanga vari mumisika yemari kwenguva pfupi. Iwe unenge uine chakakura chakapihwa kwaunogona kuisa mari yako kubva ikozvino. Zvichienderana nenguva yekubatana hupfumi hwenyika hwese huri kupfuura.
Sezvo zvichinyatso kutaurwa kuti mari haimborara, unogona kuwana misika kusvikira mwedzi mishoma yapfuura vashoma vakaongorora nevamiririri vezvemari. Zvimwe zvacho zvinogona kubatsira zvakanyanya uye uyu ndiwo mukana wekuvhura zvinzvimbo mavari.
Mukirasi ino yemari iwe unogona kunatsiridza iyo kukura kutarisira iyo inokupa iwe imwe mhando yezvakawanda zvakajairika mashandiro. Kusvika padanho rekuti ivo vanogona kubatsira kukwidziridza ese marudzi ese mashandiro, uye vangangoita pasina miganho mumaitiro akashandiswa kubva ikozvino zvichienda
Njodzi mune aya mashandiro
Pane zvinopesana, sarudzo yemisika kunze kwemaawa akajairwa inoda kutarisirwa kwakanyanya nekuda kweakasarudzika maitiro eaya mashandiro mumisika yemari. Pakati pevamwe idzo dzatinonongedza pazasi.
Iwe unofanirwa kupa iyo Hukuru ruzivo mukirasi ino yekushanda. Nekuti iwo akaomesesa mafambiro anoda kuti iwe ushandiswe zvakanyanya kushanda pamwe neaya mare emari.
Unogona kukusiira ma euro mazhinji pasi pemugwagwa uye nenguva ipfupi kwazvo kupfuura zvaungafunge kubva pakutanga.
Uchave zvakanyanya akabata pasirese yemari sezvo iwe uchizoita mashandiro panguva iyo iwe yaunogona kunakirwa yako yemahara nguva. Mune ino pfungwa, usakahadzika kuti iwe ucharasikirwa nemhando yehupenyu kuti uve nevadikani vako.
Izvo zvakanyanya kuomarara kuona makwara kwaunogona kushanda nerudzi urwu rwekudyara. Kusvika pakuti iwe uchafanirwa tsvaga mamwe mapuratifomu. Uchaita kuti uve neruzivo rwakakura mukuita uye izvo chete neruzivo zvaunokwanisa kuwana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Mari hairari: kudyara muvhiki
Chinotora chinotora nguva yakareba sei?